Oracle kwupụtara ọkwa nke Java SE 15, mara ihe dị ọhụrụ | Site na Linux
Oracle kwupụtara ntọhapụ nke Java SE 15, mara ihe dị ọhụụ
Mgbe ọnwa isii nke mmepe, Oracle kwupụtara ntọhapụ nke ọhụrụ version nke Java SE 15 dị ka ntinye akwụkwọ nke na-eji ihe mmeghe emeghe OpenJDK oru.
Java SE 15 a na-ekewa ya dị ka ụdị nkwado mgbe niile, na mmelite ka a hapụ ruo mgbe ọzọ. Java SE 11 kwesịrị iji dị ka ụkwụ nkwado ogologo oge (LTS) na mmelite ga-ahapụ ruo 2026. Alaka gara aga nke Java 8 LTS ga-akwado ya rue Disemba 2020. LTS ọzọ na-esote ga-eme maka Septemba 2021.
Main ọhụrụ atụmatụ nke Java SE 15
Na ụdị ọhụrụ a, arụ ọrụ nkwado maka EdDSA RFC 8032 Akara aka, mmejuputa iwu nke EdDSA adịghị adabere na nyiwe ngwaike, a na-echebe ya megide mwakpo ọwa n'akụkụ (oge niile a ga-agbakọ oge niile) ma ọ gafere usoro mmezu ECDSA nke edepụtara na C n'ihe gbasara arụmọrụ, otu ọkwa nchekwa ahụ
Mgbanwe ọzọ bụ ibuo nkwado maka anọkwasị ọmụmụ na ihu que ha enweghị ike iji ya na klaasị ndị ọzọ na ihu iketa, ịgbatị, ma ọ bụ enweghị ike.
Ọzọkwa pụta ìhè na nke a ọhụrụ version nke Java SE 15 bụ nkwado maka klas zoro ezo nke enweghị ike iji ya bytecode nke klaasị ndị ọzọ. Isi ojiji nke klas zoro ezo bụ maka kpuchie nke na-ewepụta klaasị na-aga n'oge oge ma jiri ya na-enweghị isi site na ntụgharị uche.
Onye na-ekpofu ahihia ZGC (Z mkpoko ahihia) emewo ka ọ kwụsie ike ma ghọtara dị ka njikere maka iji ya mee ihe n'ozuzu. ZGC na-arụ ọrụ na ọnọdụ nnabata iji belata ịdị larịị n'ihi mkpokọta ahịhịa dị ka o kwere mee (nkwụsị mgbe ị na-eji ZGC agafeghị 10 ms) ma nwee ike ịrụ ọrụ na obere na nnukwu obo, sitere na ọtụtụ narị site na megabytes ruo ọtụtụ terabytes.
Onye na-ekpofu ahihia Shenandoah kwụsiri ike ma ghọta dị ka ebe niile. Shenandoah mepụtara Red Hat na pụtara maka iji algọridim na-ebelata oge ịkwụsịtụ n'oge mkpofu ahịhịa mgbe nhicha ke ukem na-agba ọsọ Java ngwa.
Ọzọkwa A kwadoro nkwado maka ederede ederede ma banye n'asụsụ: a ụdị ọhụrụ nke ụdọ nkịtị Ha na-enye gị ohere ịgụnye ọtụtụ ederede ederede na koodu isi gị na-enweghị iji mkpụrụedemede mgbapụ ma na-echekwa usoro ederede ederede na ngọngọ.
N'aka nke ozo Legacy DatagramSocket API enwetalaghari dika ochie java.net.DatagramSocket na java.net.MulticastSocket e mejuputara mmejuputa atumatu nke oge a nke di nfe izopu ya ma dokwaa, ma dakọtara ya na eri ndị mepere emepe nke ọrụ Loom rụpụtara.
N'ihe banyere mmebi iwu kwekọrọ na koodu dị ugbu a, ewepụbeghị usoro ochie ma enwere ike rụọ ọrụ site na iji jdk.net.usePlainDatagramSocketImpl.
Ọzọkwa, nke abụọ ibuo mmejuputa iwu nke ụkpụrụ kenha na-chọrọ na onye ọrụ "ọmụmaatụ nke", nke na-enye gị ohere ịkọwapụta onye na-agbanwe mpaghara ka ị nweta uru a gosipụtara.
Na mmechi, emeputara nnwale nnwale nke abụọ nke isiokwu "ndekọ" ahụ, nke na-enye mpempe akwụkwọ maka nkọwapụta klaasị, na-ezere mkpa iji kọwaa n'ụzọ doro anya ọtụtụ ụzọ dị ala dịka nha anya (), hashCode () na toString (), na ebe ebe echekwara data naanị na mpaghara.
Finalmente mgbanwe ndị ọzọ na-apụta ìhè:
A na-atụpụta usoro nke abụọ nke ohere ịnweta ohere mpụga API
Usoro nkwalite mmacha nke ejiri HotSpot JVM mee ihe iji belata mkpọchi mkpuchi nwere nkwarụ ma belata.
Ntinye RMI nke usoro a kwupụtara, nke a ga-ewepụ na nhapụ n'ọdịnihu.
Ewepu ọdụ ụgbọ mmiri maka ndị na-arụ ọrụ Solaris OS na SPARC (Solaris / SPARC, Solaris / x64, na Linux / SPARC).
Si ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere ụdị ọhụrụ a. Nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Oracle kwupụtara ntọhapụ nke Java SE 15, mara ihe dị ọhụụ
UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: WM ọzọ 5 maka Linux
Deepin Linux 20 dị ma na-abịa na ndozi ndozi, ntinye na ndị ọzọ